"16 Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala. 17 Ary mitandrema hianareo noho ny amin’ny olona; fa hatolony ho amin’ny Synedriona sy hokapohiny ao amin’ny synagogany hianareo; 18 ary ho entiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka hianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin’ny jentilisa. 19 Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo; Fa homena anareo amin’izany ora izany izay holazainareo. 20 Fa tsy hianareo no miteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no miteny ao anatinareo. 21 Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany; ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. 22 Ary ho halan’ny olona rehetra hianareo noho ny anarako; fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena. 23 Ary raha manenjika anareo amin’ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin’ny hafa; fa lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy hahatapitra ny tanànan’ny Isiraely hianareo tsy akory mandra-pahatongan’ny Zanak’olona. 24 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. 25 Fa ampy amin’ny mpianatra, raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo, raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy mainka va ny ankohonany? 26 Koa amin’izany aza matahotra azy hianareo; fa tsy misy afenina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fantatra. 27 Izay lazaiko aminareo ao amin’ny maizina, dia ambarao eo amin’ny mazava, ary izay ren’ny sofinareo, dia torio eo ambonin’ny tampon-trano. 28 Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin’ny helo. 29 Tsy varidimiventy ihany va no vidin’ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ireny ho latsaka amin’ny tany, raha tsy avelan’ny Rainareo. 30 Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. 31 Koa aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo. 32 Ary amin’izany na zovy na zovy no hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona, dia hekeko kosa izy eo anatrehan’ny Raiko Izay any an-danitra. 33 Fa na zovy na zovy no handà Ahy eo anatrehan’ny olona, dia holaviko kosa izy eo anatrehan’ny Raiko Izay any an-danitra." Matio 10:16-33
Jesosy Kristy tsy manafina ny fahasarotan’ny iraka (16-23). Tontolo tsy manam-piantrana no asehon’i Jesosy Kristy eto, ao ny herisetra ara-batana sy ara-moraly amin’ny alalan’ny kapoka sy fitorina any amin’ny tribonaly noho ny fanarahana an’i Kristy. Eo amin’ny sehatra rehetra mihitsy no hisian’izany herisetra izany. Ohatra: mpanapaka sy mpanjaka (18), fianakaviana (21), tanàna (23). Hoy Jesosy hoe aza matahotra fa hendre ary mba aoka ho malina (16). Raha sendra ny fanenjehana sy fiampangana amin’ny tsi-rariny ary isika (19, 20, 23), Andriamanitra mampanantena antsika ny Fanahy Masina hiteny amin’ny toerantsika ary mandidy antsika handositra (Salamo 55. 8).
Mpianatra manahaka ny mpampianatra (24-33). Ny mpianatra dia mifamatotra amin’ny mpampianatra azy. Izay mihatra na iainan’ny andaniny dia toy izany koa no mahazo ny ankilany. Noho izany, raha i Jesosy no ekentsika ho Mpampianatra amin’ny fiainantsika manontolo, tsy misy tokony hatahorantsika (26, 28, 31).
Aza matahotra ny haneho am-pahibemaso ny lokonao sy ny maha-kristianina anao. Na eny amin’ny toeram-piasana ianao na eny amin’ny biraom-panjakana, n’aiza n’aiza misy anao satria tsy fanahy osa no ao anatinao fa fanahy mahery (2 Timoty 1:7). Misy mihitsy ny fikambanan’ny tsy mpino any amin’ny tany mandroso manao izay hitaomana ny kristianina hiala amin’ny finoany ary dia mahasintona olona anarivony maro izany fikambanana izany, ary tsy miafina izy ireo. Hoy ny Tompo hoe tsy misy takona tsy ho hita, koa maninona no tsy hambara ny Filazantsara? Raha tsy izany dia tsy ho isan’ny ekipa mpandresin’ny Tompo ianao, ka sao dia ho laviny (33)!